Puntland oo war kasoo saartay hakinta mashruuca jidka Garoowe-Gaalkacayo - Halbeeg News
Puntland oo war kasoo saartay hakinta mashruuca jidka Garoowe-Gaalkacayo
GAROOWE (HALBEEG) – Maamul Goboleedka Puntland ayaa war kasoo saaray hakinta ay hay’adda Jarmalka ah ee GIZ ku samaysay mashruuca dayactirka jidka laamiga ah ee isku xira magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacayo.
War-saxaafadeed ku qornaa afka English-ka oo kasoo baxay Madaxtooyada Garoowe, ayaa lagu sheegay go’aankii Hay’adda GIZ ku hakisay mashruucu ahaa mid lagu deg degay, maadaama aan caddaymo dhammaystiran loo hayn eedeymaha loo soo jeediyey Hay’adda Waddooyinka Puntland ee PHA.
Qoraalka waxaa lagu xusay in kaalinta dowladda Jarmalku ka qaadanaysay mashruucani aad u kooban tahay, islamarkaana go’aanka Hay’adda GIZ aanu saameyn ku yeelan doonin sii socoshada mashruuca, maadaama maalgeliyaha ugu weyn ee mashruucu uu yahay Midowga Yurub.
“Waxaan sidoo kale cadaynaynaa in maalgelinta Dowladda Jarmalku qayb yar ka ahayd dhaqaalaha ku baxaya dayactirka jidka isku xira Jalam iyo Xarfo, kaas oo qayb ka ah Mashruuca Dayactirka Jidka Garoowe-Gaalkacayo, iyo in Hay’adda GIZ ay xubin ka ahayd qaybaha bahwadaagta ku ah fulinta mashruuca, sidaas darteed mashruucani marnaba halis uguma jiro in la joojiyo. Dowladda Puntland waxay si dhow ula shaqayn doontaa maalgeliyaha u weyn mashruucani leeyahay oo ah Midowga Yurub, kaas oo horay u shaaciyey sida ay uga go’an tahay dhammaystirka iyo hirgelinta mashruucan” qoraalka ayaa sidaas lagu yiri.
Puntland ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay sida ugu dhaqsaha badan xal ugu raadin doonto dhaliilaha ka jira xaggooda si howsha mashruuca loo sii dardar geliyo, maadaama jidkani muhiim u yahay dhaqaalaha iyo horumarka deegaannada Puntland.
“Jidka Garoowe-Gaalkacayo lafdhabar ayuu u yahay dhaqaalaha Puntland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaanu ku dadaalaynaa in aan Midowga Yurub kala shaqayno sidii mashruucaas loo dhammaystiri lahaa. Inkastoo ay wax laga xumaado tahay go’aanka hay’adda Jarmalka ee GIZ ku gaartay inay dib uga gurato mashruucan oo muhiim u ah tayeynta adeegga caafimaadka, shaqo abuurka iyo guud ahaan horumarinta nolosha dadka reer Puntland”
Dhaqaale garaaya 20.75 milyan oo Yuuro ayaa ku baxaya mashruuca lagu dayactirayo jidka isku xira magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacayo, lacagtaas 17.75 milyan oo kamid ah waxaa ku deeqay Midowga Yurub, halka Dowladda Jarmalku ballan qaadday in ay bixin doonto 3 milyan oo Yuuro.
Fulinta mashruucan waxay Puntland u xilsaaratay Hay’adda Waddooyinka ee Puntland (PHA), halka Dowladda Jarmalka iyo Midowga Yurub u wakiisheen Hay’adda GIZ in ay mashruucan kor kala socoto dhaqaalahana iyada lasoo marsiiyo.
Wasiirrada caafimaadka Somalia, Kenya iyo Ethiopia oo ka shiraya dabargoynta cudurka Dabaysha
Micheal Keating oo ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya